China UV Kucheka Bhodhi Sterilizer Cabinet fekitori uye vagadziri | Meiling
UV Kucheka Bhodhi Sterilizer Cabinet
UV Kucheka Bhodhi Sterilizer Cabinet inoshongedzerwa 1-3pcs TPU yekucheka bhodhi inova mabhakitiriya uye mildew proof uye iri nyore kuchenesa. Basa rakazara rinoita kuti iwe uve mune hutano hupenyu hwehupenyu. Yakareruka kushandisa, kuita kwepamusoro, uye mutengo-unoshanda. Disinfection kunyatsoshanda kusvika 99,99%.
Muenzaniso WDC-08 / MS-09
Mashoko mapurasitiki, mapurasitiki
Rated voltage / simba / frequency 220V / 50W / 50HZ
Rinoshanda disinfection uye sterilization
Ruvara Chena / Dema / Girinhi
Kukwanisa 1 * yekuchekesa bhodhi / 3 * yekuchekesa bhodhi + 3 * mapanga + 1 * chigero + zvigunwe
Chopping board iyo yakagadzirirwa 1-3pcs TPU kutema
Kumashure Nemugadziri wemvura
Mativi maviri Nechiedza che UV
Pazasi Inovhuvhuta 60- inodziya mweya
Saizi yechigadzirwa 400 * 110 * 265mm
Tambo yemagetsi 1.5 mita
1. Mavhiri maviri UV-C marefu machubhu anoshanda zvakanyanya.
UV-C mwenje, 200-300nm. Yakakura nzvimbo mbereko. Ultraviolet mwaranzi inogona kuvhenekesa makona ese emuchina pasina akafa angle, zvinobudirira kuuraya mabhakitiriya akajairika uye hutachiona muhupenyu.
2. 60 ℃ inopisa mweya yekuomesa midziyo yemukicheni, antibacterial uye mildew mahara
Iyo yepasi vortex cyclone inotungamira iyo yekufema kuburikidza nePTC kudziya muviri iyo inogadzira yakanyanya kupisa mweya unopisa mumushini wese unogona kukurumidza kuzadzisa kuomesa uye mabhakitiriya static mhedzisiro.
3. Iyo inoshanda yekuuraya mwero webhakitiriya i99,99%
Kaviri chubhu UV. Baby tableware zvakare yakachengeteka kushandisa. Iyo inoshanda yekuuraya mwero we e.coil uye staphylococcus aureoles yaive 99.99%.
4. Mhando dzese dzezvishandiso dzinogona kuiswa mumba
Inokodzera anopfuura 98% ematurusi ekucheka nehupamhi hwakasiyana uye ukobvu pamusika Yakabikwa chikafu chebanga, idya banga mbishi, banga remichero.Hutano uye husina chepfu.
5. Chikafu chegiredhi TPU bhodhi, inochinja uye iri nyore
Inoteedzerwa huni kucheka miriwo kunzwa, yakanaka yekucheka haina kuomarara, inorwisa mabhakitiriya uye nehupupuri humbowo zvinhu, zvine hutano uye zvakachengeteka, kupfeka kusagadzikana
6. Maodhi mana ekushanda anoshandiswa zvakare nevakuru zvakapusa
Auto mode tinya kumusoro kumusoro bhatani kamwe (maminitsi makumi matanhatu): UV Sterilization + yakaoma.
7. Simbisa modhiyo pinda kumusoro kumusoro bhatani kaviri (90 maminetsi): UV Sterilization + yakaoma
UV modhi pinda bhatani rimwe (maminitsi makumi matatu): UV Sterilization.
Dhinda kiyi kaviri mukuomesa modhi (maminetsi makumi matanhatu): Dza.
Pashure: Knife Block
Kicheni Mudziyo Sterilizer